SomaliaReport: Dagaal Ooge Indha Cadde oo Hubkii Wareejiyey
Dagaal Ooge Indha Cadde oo Hubkii Wareejiyey
Jeneraal Sheekh Yusuf Siyad (Indha Cadde) oo Caawimay DKMG
Dagaal Ooge Soomaaliyeed oo caan ah, Sheekh Yusuf Siyad (Indha Cadde), ayaa hubkiisii ku wareejiyey Dowladda Ku Meel Gaarka (DKMG) Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugida Ururka Modowga Afrika (AMISOM) maanta magaalada Muqdisho.
Xaflada la kala wareega waxaa lagu qabtay Garoonka Caayaaraha ee Mugdisho, waxaana kasoo qaybgalay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali, Duqa Muqdisho, Maxamed Axmed Tarsan, Hogaamiyaha Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed, Jeneraal Cabdulqaadir Diini, iyo Hogaamiyaha AMISOM, Jeneraal Fred Mugisha.
Indha Cadde wuxuu si sharci ah u wareejiyey in ka badan sagaal gaaddidka militariga iyo hub kala duwan.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan hubkayga siiyo dowladda si loogu caawimo dadka Soomaaliyeed. Dowladdu way u qalantaa in hubka lagu wareejiyo maadaama ay ka adkaatay malayshoyada al-Shabaab oo kasoo horjeeday nabada. Dad badan ayaa igu magacaabi jiray dagaal ooge, laakiinse hada ka dib igu oran mayaan,” ayuu yiri.
Dowladda iyo saraakiisha ciidamaduba way ammaaneen hub wareejinta.
“Waa talaabo wanaagsan oo mudan inay tusaale u noqoto inta kale oo dhan. Waxaan kusoo dhaweynaynaa inuu la shaqeeyo ciidamada dowladda,” jeneraal Diini ayaa xaflada ka yiri.
Indha Cadde wuxuu soo caan baxay markii madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarka, Cabdiqaasim Salaad Xasan, u doortay Guddomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose sanadkii 2000. Wuxuuna xilkaa hayey ilaa sannadkii 2006 oo ka mid noqday Midowga Maxkammdaha Islaamiga ah.
Markii ay ciidamada Itoobiyaanku soo galeen dhamaadkii 2006, Indha Cadde wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha Islaamiga ah ee la dagaalamayey Dowladda Ku Meel Gaarka ah iyo ciidamada Itoobiyaanka mudo labo sano ah isagoo ka tirsanaa Xisbul Islaam.
Juun 2009 wuxuu heshiis la gaaray DKMG waxaan aloo magacaabay wasiirka difaaca, laakiinse wuu iscasilay sanad ka dib.